TARTAN & TACLIIN oo galay wareeggii 2aad (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 4, 2018 2:02 b 4
Barnaamijka Tartan & Tacliin oo si habsami la’aan ah uga socda Radio Daljir Xarumihiisa kala duwan ee Soomaaliya, ayna sahlaan shirkadaha SOMTEL iyo Jaamacada Badda Cas ayaa galay wareegii labaad ee tartanka, ayada oo xalay la shaaciyay 10 dugsi sare oo u soo gudbay wareega labaad ee Tartan & Tacliin.
Barnaamijka TARTAN & TACLIIN waxaa sannadkaan 2018 ku tartamay 15 dugsi sare Puntland. Waxaa barnaamijka suurtagaliyey shirkadaha SOMTEL | share your world iyo Jaamacada Badda Cas, waxaana qayb ka ah Dalladda Waxbarasha PEN, Wasaarada Waxbarashada Puntland, iyo waliba Radio Daljir oo aad habeen walba kala socotaan.
Halkan ka dhegayso tarbixinta Xasan Heykal.
Maqaalo Kale 275 Wararka 19866
princess ikraam 2 years ago
barnaamijka tartan iyo tacliin
Bishaar Axmed Yasiin 2 years ago
Lambarkee kala xiriira Warbaahinta soomaliyeed Ee Daljir